Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Muqdisho iyo dowladda Talyaaniga oo war kasoo saartay | SMC
Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Muqdisho iyo dowladda Talyaaniga oo war kasoo saartay
Wararkii ugu dambeeyey qaraxii Muqdisho iyo dowladda Talyaaniga oo war kasoo saartay
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax Barqanimadii maanta ka dhacay inta u dhexeeysa Kullyadda Jeelle Siyaad iyo Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya gaar ahaan Suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaalla meel aan sidaas uga fogeyn Kulyadda.
Qaraxaas ayaa waxaa lala eegtay Kolonyo ay la socdeen Ciidamo Talyaani xili ay socdaal ku marayeen Suuq lagu iibiyo Ariga,isla markaana waxaa Ciidanka ay wateen saddex gaadiid oo nooca dagaalka ah.
Sida la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacmay illaa 3 qof oo Shacab ah oo marayey jidka Xilliga uu qaraxa dhacayey, waxaana weli la helin Khasaaraha gaaray Ciidamada Talyaaniga.
Wasaaradda Gaashaandhigga Talyaaniga oo qoraal kusoo qortay barta Twitterka ayaa xaqiijisay in qaraxaas lala eegtay Ciidamo ka tirsan Talyaaniga oo marayey jidka Warshadaha, kadib markii ay kasoo laabteen tababar ay soo siiyeen ciidamada Soomaaliya.
Wasaaradda ayaa sheegtay inuu qaraxa haleelay laba ka mid ah gawaaridii Gaashaannaa ee weerarka qabsaday. Waxay sheegtay inuusan jirin khasaaro Ciidamada Talyaaniga kasoo gaaray Qaraxii Muqdisho lagula eegtay sida ay sheegatay.
Forze Armate StatoMaggioreDifesa✔@SM_Difesa
Al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano.#ForzeArmate #MissioniMilitari #Somalia
9212:09 PM – Sep 30, 2019Twitter Ads info and privacy59 people are talking about this
Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay weerarkaas lagu qaaday Ciidamada Talyaaniga, inkastoo weerarada noocaan oo kale ah looga bartay Kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirto Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM.
Ciidamada Talyaaniga ee la beegsaday ayaa waxay kamid yihiin kuwa Midowga Yurub ee Soomaaliya u joogo inay tababaraan Ciidamada Dowladda Soomaaliya, waxayna kolonyada weerarka lagu qaaday ka imaadeen Wasaaradda Gaashaandhigga oo tababar lagu siiyo qaar ka tirsan Ciidamada Midowga Yurub.
Sanadkii hore ayay aheyd markii sidan oo kale Kolonyo Ciidamada Talyaani la socdeen lagu weeraray meel aan sidaa uga fogeyn Kulyadda Jaalle Siyaad.
Previous articleSawirro: Al-Shabaab oo soo bandhigay ERGADII soo dooratay Prof. JAWAARI
Next articleSafaaradda Mareykanka Ee Somalia Oo War Kasoo Saartay Weerarkii Ballidoogle